Ahoana ny fampidirana ny pirinty amin'ny mannequins | Famoronana an-tserasera
Ahoana ny fampidirana ny pirinty amin'ny mannequins
Beatriz Hernani | | Fitaovana famolavolana
Rehefa nanomboka niasa tamin'ny famolavolana endrika aho dia nanao izany tamin'ny sehatry ny lamaody. Tsy nanao modely ho an'ny katalaogin-damaody, sora-baventy na flyer ihany koa izy, fa nanao pirinty sy famelabelarana ny fanangonana rehetra nataon'ny orinasa ihany koa.
Ity traikefa asa ity no mitarika ahy hanoratra ity lahatsoratra ity, satria heveriko izany mety vita tsara be ny asa fa tena ilaina tokoa ny fampisehoana azy.
Mety raha tsy manao zavatra tsara isika raha vao jerena, dia zavatra roa no hitranga amintsika izay tsy tiantsika hitranga:
sa tsy hahomby isika
sa ho lany bebe kokoa amintsika ny fanaovana azy
Ary ny marina dia, tsy tiantsika hitranga amintsika ny iray amin'ireo zavatra roa ireo.
Noho io antony io dia nieritreritra aho fa mety hahaliana ny fanoratana ity lahatsoratra ity, tiako ny hanazava ahoana no ahafahantsika manisy pirinty amin'ny mannequins ary amin'izany dia afaka mamorona fampisehoana tsara ny tetikasanay izay mampifangaro ny endrika lamaody amin'ny endrika sary.
Hosoratantsika ny mannequin. Ity dingana ity dia ataoko amin'ny alàlan'ny fanampian'ny Illustrator, fa afaka misafidy ilay programa tianao indrindra ianao.
Vantany vao vitantsika ny endrik'ilay sary, dia tahirintsika ary sokafantsika amin'ny photoshop.
Amin'ny Photoshop dia hiasa miaraka amin'ny fitaovana "motifs" isika, noho izany ny tsy maintsy ataontsika voalohany dia ny manova ny lamina ho lasa motif.
Rehefa efa misokatra ao amin'ny Photoshop ny tarehintsika dia mila misafidy ireo faritra tiantsika hampidirina ny modely, ohatra, raha lobaka izany, toy ny ohatra napetrako, nanapa-kevitra ny hanonta ny eo alohany, ka samy ho faritra voafantina ireo.
Ao amin'ireo safidy dia safidintsika ny "antony manosika" ary ampidiro ny lamina izay novainay teo aloha. Azontsika atao ny manamboatra azy io amin'ny habe tadiavintsika.
Ity misy horonan-tsary fohy mba hahitanao ny tsotra dia tsotra sy hahamora ny fahitana azy ho anao.
Raha vantany vao vonona daholo ny mannequins miaraka amin'ny dian-tongony, dia tsy mila manamboatra iray fotsiny isika fampisehoana ny iray manontolo izay madio sy milamina. Manoro hevitra anao aho hampiasa ny programa Canva izay nolazaiko taminao tao amin'ny lahatsoratro teo aloha, hanaovana ny lamina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Ahoana ny fampidirana ny pirinty amin'ny mannequins
Ny tranombakoka an-tserasera dia mampiseho aminao ny tantaran'ny fiandohana sy ny fivoaran'ny Photoshop